I-China 45 HRC Carbide 2 Flute Standard Length Ball Iimpumlo zokuPhela kweeMveliso zabavelisi kunye nabathengisi | Mingtaishun
I-45 yeHRC khabhayithi 2 Ubungakanani obuPhezulu beBhola yeeMpumlo zokuphela kweeMillum zealuminium
1) Ndingalifumana nini ixabiso?
Sihlala sicaphula ngaphakathi kweeyure ezingama-24 emva kokuba sifumene imibuzo.Ukuba ungxamisekile kakhulu ukufumana ixabiso, nceda usitsalele umnxeba okanye usixelele nge-imeyile yakho ukuze siwuthathele ingqalelo umbuzo wakho ophambili.
2) Ndingayifumana njani isampuli ukujonga umgangatho wakho?
Emva kokuqinisekiswa kwexabiso, unokufuna iisampulu ukujonga umgangatho wethu. Ukuba ufuna nje isampulu engenanto ukujonga uyilo kunye nomgangatho wephepha, siya kukubonelela ngesampulu simahla, ukuba nje uza kuthengisa iimpahla.
3) Ndingalindela ixesha elingakanani ukufumana isampuli?
Emva kokuba uhlawule intlawulo yesampula kwaye usithumele iifayile eziqinisekisiweyo, iisampulu ziya kuba zilungele ukuhanjiswa ngeentsuku ezi-3-7. Iisampulu ziya kuthunyelwa kuwe ngokudlulisa kwaye zifike kwiintsuku zokusebenza ezi-3-5. Ungasebenzisa iakhawunti yakho ecacileyo okanye usibhatalele kwangaphambili ukuba awunayo iakhawunti.
4) Isebenza ixesha elingakanani yonke le nkqubo?
Emva kokuba ubeke iodolo, ixesha lokuphatha imveliso li malunga neentsuku ezingama-45-60. Sifuna iintsuku ezili-15 ukulungiselela zonke izinto emva kweentsuku ezingama-30 zokwenza imveliso.
5) Kuthekani ngothutho kunye nomhla wokuhanjiswa?
Ngokwesiqhelo sisebenzisa ukuthunyelwa ukuhambisa iimpahla, malunga neentsuku ezingama-25 ukuya kuma-40, ikwajongana nokuba yeyiphi i-coutry kunye nezibuko okhoyo, kunokuba mfutshane ukuba ufuna ukuthumela iimpahla ezinjengeAsia. Ukuba kukho izinto ezithile ezingxamisekileyo singazithumela iimpahla nge-air expression, okoko uhlawula iindleko zendlela.
6) Ngaba uthengisa inkampani okanye u-manufaturer?
Singumenzi wobugcisa. Asingabanini bezixhobo zethu zecandelo kuphela, kodwa sinomzi-mveliso wekhabhayithi.
7) Uphi umzi-mveliso wakho?
Sikhoyo kwi-Weishanhu Road 100, e-Xixiashu Idolophu, kwisiThili esitsha seNtla, kwisiXeko sase-Changzhou, e-Jiangsu, e-China.
8) Ndingalindela ixesha elingakanani ukufumana isampuli?
9) Kuthekani ngesitokhwe sakho?
Sineemveliso ezinkulu ezikwistokhwe, iintlobo eziqhelekileyo kunye nobukhulu bazo zonke zikhona.
10) Ngaba ukuhanjiswa simahla kunokwenzeka?
Asiboneleli ngenkonzo yokuhambisa simahla. Singasifumana isaphulelo ukuba uthenga iimveliso ezininzi.
Egqithileyo I-HRC ye-Carbide ye-2 yeFlabathi yoMgangatho oPheleleyo weeMpumlo zokuphela kweeMpumlo
Okulandelayo: I-HRC Carbide 2 Imitshini yokuGcina uMgangatho oSisiseko